Home Somali News Somaliland: Cawil Oo Ka Hadlay Go’aankii Maxkamadda Sare, Madaxweynahana Kula Taliyay Inuu...
Wasiirkii maaliyadda ee xukuumadii Daahir Rayaale Kaahin,, ayaa ka hadlay go’aanka ay maxkamadda sare ka soo saartay muddo kordhintii guurtida iyo loolanka murashaxnimo ee xisbiga KULMIYE ka dhex jira marka uu Madaxweynuhu mudadii dhammaysto.
Danjire Cawil, oo isagoo jooga magaalada Nayroobi ee dalka Kenya xalay u waramay Wargeyska Geeska Afrika, wuxuu ku baaqay in halkaas lagu joojiyo murankii siyaasiga ahaa ee taagnaa mar haddii ay maxkamadii sare go’aan ka soo saartay, waxase uu Madaxweyne Siilaanyo u soo jeediyay inuu xisbiyada u qabto kulan la isku bogsiiyo, si hore looga socdo.
“Mar haddii maxkamadii sare ay go’aan ka soo saartay murankii oo ay xalaalaysay muddo kordhintii guurtida sidaas lagu aqbalay ayay ku dhammaatay. Waa in iyadoo dalka loo danaynayo sidaas loogu hoggaansamay go’aanka maxkamadda sare lagu socdo, madaxweynuhuna waa inuu asxaabta isugu yeedhaa oo dabadeedna mudadu maba badna oo waa sannadee sidaas lagu shaqeeyo oo la dedaalo.
Siyaasaduna maaha cadaawad oo qofka cadaawad ka dhigaa isagaa khaldan ee waa in maanka taas lagu hayo. Waxaan aad ugu celcelinayaa inaan laga daba buuqin go’aanka maxkamadda sare oo niyad samidaas lagu qaabilay lagu dhammeeyo.”
Danjire Cawil oo la weydiiyay sida uu u arko loolanka aan saddexdii sannadood ee u dambeeyay marna hakan ee ku saabsan murashaxa xisbiga KULMIYE ee madaxweynenimo marka uu Madaxweyne Siilaanyo mudadiisa dhammaysto wuxuu yidhi
“Xisbi kasta muranka iyo khilaafku uma wanaagsana, weliba xisbul xaakimka in dhexdiisa murashaxnimo la isku qabsadaa waxay leedahay dhibaatadeeda. Adduunka xisbul xaakimku murashaxnimada iskuma qabsado oo marka hore ayaaba la isla ogyahay murashaxa.
UDUB hore isugumay qabsan, xisbiga Dimuqraadiga ee Maraykanku iskuma qabsan karaan murahaxa madaxweyne waayo haddii uu xisbul xaakimku is qabsado dhibteeda ayay leedahay oo wadanka ayay saamaynaysaa. Markaas waxa loo baahanyahay in Madaxweynaha oo ah odaygii xisbiga KULMIYE lala fadhiisto oo dabadeedna nin murashax ah lala soo baxo oo aan laga dhigin in lix nin halkaas ku tartamaan oo lagu kala yaaco.
Waa in albaabka la isu soo xidhaa oo madaxweynuhu u yeedho ragga tartamaya oo dabadeed go’aan la gaadhaa oo la yidhaahdaa waar kuma ayaynu maanta taageernaa oo daba fadhiisanaa. Laakiin haddii ay noqoto in gole weynaha la soo dhigo lix nin oo tartamaya oo ay dabadeed kala adkaadaan dhibteeda ayay leedahay, saamayna way ku yeelanaysaa dalka. Markaas waxaan soo jeedinayaa in ragga tartamaya kulamo hoose lagu kala reebo, mana qabo in lix nin shirka xisbiga ku dhex tartamaan, waayo dhaawac ayay taasi xisbiga ku keenaysaa.”
Somaliland: Mudanayaasha Xisbiga WADDANI Ku Leeyahay Golaha Wakiillada Oo Fad-qalalo Ka Abuuray Fadhigii Shalay
Somalia: Dagaal culus oo ciidamada dowladda iyo Al-shabaab ku dhaxmaraya dulleedka Garbahaarey